USB ကနေတစ်ဆင့်တီဗီရန်သင့် LAPTOP ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကိုဘယ်လို - WINDOWS ကို - 2019
USB ကနေတစ်ဆင့်တီဗီဖို့ Laptop ကိုချိတ်ဆက်ခြင်း
pattern သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုအစီအစဉ်ကိုအီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်ပန်းထုတ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဤဖြစ်စဉ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။ Software များအားလုံးလိုအပ်သော tools များနှင့်အတူအယ်ဒီတာအဖြစ်အကောင်အထည်ဖော်နေသည်။ ရဲ့အသေးစိတ်ကိုယ်စားလှယ်၌ဤကိုကြည့်ကြပါစို့။
သစ်တစ်ခု scheme ကိုတက်ချိန်ညှိခြင်း
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုမပေးမှသာပတ္တူများအတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအရေအတွက်, ဒါပေမယ့်လည်းအရောင်, အစီအစဉ်နှင့်ကွက်အမျိုးအစားကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့တပ်မက်လိုချင်သောအ parameters တွေကိုတင်ထားရန်သူတို့အပေါ်မှာအကူးအပြောင်း, အတော်ကြာ tabs များနှင့်အတူတစ်ဦး menu ကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်အရာသစ်တစ်ခုစီမံကိန်းဖန်တီးရန်လိုအပ်သည်။
ပန်းထိုး tools များ၏သေးငယ်တဲ့အစုကို အသုံးပြု. ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်အမျိုးအစားအဘို့အအများစုမှာတာဝန်ရှိသည် - ကအပြည့်အဝ, ဝက်လက်ဝါးကပ်တိုင်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက် stezhek နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်, စာတန်း add, knots နဲ့ပုတီးအတော်ကြာအမျိုးမျိုးရှိဖြည့်စွက်ထားပါသည်။
အဆိုပါစံနမူနာသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုစာသားတစ်ခုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ညှိနှိုင်းမှုရှိပါတယ်။ တည်းဖြတ် menu ကိုဝင်ရောက်ဖို့ဒီ tool ကိုရွေးချယ်ပါ။ အဆိုပါကျောက်စာနှစ်မျိုးခွဲခြားထားပါသည်။ ပန်းများအတွက်ပထမဦးဆုံးဝတ်စုံ, က, သာအထူးအားလုံးပုံမှန်အတိုင်းစံဖောင့်ကင်းမဲ့။ ဒုတိယတစ်မျိုးမှာဂန္ - ထိုကမ္ပည်းရွေးချယ်ထားသောဖောင့်အညီခါတိုင်းလိုပုံစံရပါလိမ့်မယ်။ နေရာများနှင့်လယ်ယာ၏အပိုဆောင်း configuration ကိုမီနူး၏အောက်ဆုံးတွင်တည်ရှိပါသည်။
အဆိုပါ developer များအရောင် palette ကောက်ဖို့ကြိုးစားနေသည့်သဘာဝနီးပါးတူညီကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုအာရုံစိုက်ခဲ့ကြသည်။ အသိပေးစာကောင်းသောအရောင်တင်ဆက်မှုနှင့်အတူသာ Monitor ပေါ်မှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကို 472 ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အဆင်းနဲ့အရိပ်ပေးထားပါတယ်။ မျိုးစုံအရောင်များကိုရွေးချယ်သင့်ကိုယ်ပိုင် palette ကိုဖန်တီးပါ။
ချည်ရဲ့ setting ကိုအာရုံစိုက်။ ဒါက window ကိုအသီးအသီးလက်ဝါးကပ်တိုင်ချုပ်၏အထူနှင့်အမျိုးအစားကိုရှေးခယျြ, ဒါမှမဟုတ်သီးခြားစီဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျတစျဦးမှ 12 strands ကနေရွေးချယ်နိုင်သည်။ အပြောင်းအလဲများချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်ယူအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, အနာဂတ်စီမံကိန်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ပါလိမ့်မည်။
အတိအကျနှစ်ခုအတွက် default အများနှင့်တစ်ခုတည်းချည်အားဖြင့်ချုပ်ခြင်း၏အထူ။ ထဲမှာ "ချုပ် Options ကို" ဒါကြောင့်မထိုက်မတန်ကိုမြင်အတိုင်းအသုံးပြုသူကပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ရှိ Configure လေဖြတ်ခြင်းနှင့်ညွှန်ပြချက်အထူဖြည့်စွက်။ ဤအခွင့်အလမ်းများကိုကပ်လျက် tabs များ၌ရှိကြ၏။
စီမံချက်၏ရွေးချယ်မှု, မျှင်အမျိုးအစားများနှင့်ရှုပ်ထွေးအပေါ် မူတည်. ကပစ္စည်းအချို့ငွေပမာဏကြာပါသည်။ pattern သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုသင်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ကိန်းဂဏန်းမှချည်ခြင်းဖြင့်သုံးစွဲစုစုပေါင်းငွေပမာဏအပေါ်အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များရရှိရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီချုပ်များအတွက်ကွိုင်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်အပေါ်ဒေတာရယူရန်, အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုဖွင့်ပါ။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် settings ကို။
အဆိုပါစံနမူနာသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရား၏ဤသုံးသပ်ချက်ကိုခုနှစ်တွင်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ tool ကအီလက်ထရွန်းနစ်ပန်းပုံစံကိုလုပ်ဖို့လိုအပျသောသူတို့အဘို့အကောင်းတစ်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုသင်, ကွဲပြားခြားနားသောအထူမျှင်ကိုအသုံးပြုဖို့သူတို့ရဲ့စားသုံးမှုကိုစောင့်ကြည့်, အပျော်တမ်းနှင့်ပညာရှင်များအဘို့စံပြခွင့်ပြုပါတယ်။
အခမဲ့စံနမူနာသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို Download လုပ်ပါ
ပန်းများအတွက်အစီအစဉ်များကိုဖန်တီးရန်အစီအစဉ်ကို Linkseyi ရဲ့ Mod သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို 7-PDF ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို မင်္ဂလာဆောင်အယ်လ်ဘမ်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုရွှေ
ရေးသားသူ: Pattern ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို
Size: 12 MB အထိ